”Qazwatu Abii Dujaanah Alkhurasaani”
walaal kusoo dhawoow webkaan hadaadan ka Diiwaan gashneen
iska diiwaan gali si aad xubin wax ku kor dhin karo oogu noqoto webka.
Walaal Ku Soo Dhawoow Shabakada Aqoon Isweedaarsiga Ee Maadow
**MAADOW.ALAFDAL.NET **waa web ay ardayda iyo dhalinyarada soomaaliyeed ay ku kala gudbisadaan macluumaadka dhan walba**SHABAKADA MAADOW** Maamulka shabakada maaadow wuxuu idin soo gudbinayaa waxqabadka shabakada sanadka 2010**SHABAKADA MAADOW**Halkaan ka daawo sidaad oogu dari laheedad shabakada mawduuc ama maqaaal ama wax walba oo faaido lah adoo naga ilaalinaya waxyaabaha ka soo horjeeda shareecada islaamka**SHABAKDA MAADOW** Digniin karishtaanka soomaaliya By maanka **SHABAKADA MAADOW**Shabakada Maadow Waxkasta oo lagu qoro Khasab ma aha in uu maamulka Raali ka yahay**SHABKADA MAADOW**
Shabkada Maadow :: Qeebta Wararka iyo Maqaalooyinka Share |
Mawduucyadaada : 59
ka Qeeb Qaadashaadaada : 165
Mahadcelin : 1
Is Diiwaangalintaa : 25/03/2010
Halkaa joogto : Mogadishu-Somalia
Shaqadaada : lecturer at PLASMA & JAZEERA Universities
Subject: ”Qazwatu Abii Dujaanah Alkhurasaani” Sun Aug 01, 2010 8:38 pm
Weerar lagu qaaday 31/12/2009 xarun ciidan oo mareykanku ku leeyahay bariga dalka Afghanistaan laguna diley saraakiil CIAda ka tirsan ayaa mawjad iclaami ah ka dhalisay Adduunka.
Haddaba waxaa mudan in aan isweydiino maxaa keeney buuqaan weyn ee iclaamiga? Yaa ka danbeeyey Weerarka?
Hogaanka sare ee ururka Alqaacida ayaa bayaan kasoo saarey qaraxii 31/12/2009 ka dhacay dalka Afghanistaan qaraxaas oo galaaftay qaar ka mid ah saraakiishii ugu sareysay ciidamada sirdoonka ee Mareykanka(CIA) kuwaasoo dalka Afghanistaan ka hawlgala.
Qiyaadada sare ee ururka ayaa soo saartey bayaan ay ugu magacdareen ”Qazwatu Abii Dujaanah Alkhurasaani” waxayna Sheegtay Al-qaacida inay kaga aargoosaneysay Hogaamiyayaal uu Mareykanku ka Dilay sida Baytulaahi Maxsuud iyo Abuu Saalax Al-Soomaali iyo Abdallah Saciid Al-liibi.
Qaraxaan muxuu kaga duwanyahay kuwii hore? sida muuqata dhacdadaan meeshay ka dhacday waa saldhig weyn oo CIAdu ku leedahay dalka Afghanistaan waxaana geestey Ururka Alqaacida oo dagaal adag kula jira ciidamada reer galbeedka ee caalamka islaamka kusoo duuley.
Qaraxyada iyo weerarada lala beegsado ciidamdaas waa joogto waxeyna ka dhacaan meelo badan oo daafaha dunida ka mid ah, mar mar waxaa loo geeystaa qasaaro ka badan kan ay hadda sheegteen sidaanna loogama hadlo hadaba aan eegno sida wax u dhaceen.
Falkaan waxaa geestey nin dhaqtar ah oo udhashey dalka Urdun (Jordan) magaciisa waxaa la dhahaa Humaam khaliil Albalawi waa 33 jir halxaas iyo 2 caruur ah ka tagay Wuxuuna ku dhashey magalada Zarqaa ee dalka Urdun waa magaaladii uu ku dhashey Sheekh alqaaid Ahmed Fudeyl Nizal oo ku magac dheeraa Abumuscab Az-zarqaawi oo reer galbeeka u dhigey duruus aysan ilaawin taariikhdooda marki ay dileena waxay jirkiisi u qaateen bentigoonka si aan loo ilaawin askartii faraha badnayd ee ay ku waayeen dagaalkii Ciraaq ee uu hogaaminaayey Zarqaawi.
Waakuma Abudjuaana al-khuarsaani(Hamaam Khaliil Al-Balawi?
Magacaan waa magac xaraki ah laakiin macna weyn ku fadhiya markii la fiirsho taariikhda islaamka.
Abudujaanah (Samaak ibn kharshah)waa saxaabigii jaliilka ahaa ee wacdarada ka dhigey dagaaladii Rasuulku calayhi salaatu wasalaam la galay cadawgii kasoo horjeedey, wasaxaabigii qaatey maalinkii uxud seeftii Rasuulka scw si uu ugu gumaado mushrikiintii rabtey inay damiso nuurka islaamka,waa saxaabigii caanka ku ahaa duubka guduudan,waa saxaabigii asxaabta qalbigoodu ku degi jirey markii uu macaarikta la galo,waa saxaabi islaamkana guulo badan u soo hoyay gaaladana hoojiyey wuxuu ku shahiidey gacantii murtadiinta dagaaladii xuruubu riddah dagaalkii yamaamah radiyalaahu canhu wajacala janata mathwaah.
Amaa khuraasaan waa dhulka Afghanistaan xagga taariikhdana magacweyn ku leh waa wadan aan marnaba gaalo gumaysan shacablkeedana aan la dulleysan waa shacab aan u dulqaadan dulliga waana xaruntii cilmiga waxaaad arkeysaan dadka ugu caansan muxadathiinta islaamka inay ka yimaadeen dhulkaas tusaale ahaan imaamadii Axaadithta soo ururiyey ee qorey sida Bukhaari,Muslim,Nisaai,Tirmudi,Abudaa’uud,Qaadii Cayaad(Caabidul xaramayn) iyo kuwa kale oo badan waxay u dhasheen wadamadii laysku oran jirey Ardul khuraasaan waxaa dhulkaas islaamka u furey Asxaabtii Rc waqtigii Cumar.
Sidaa darted magacu ciyaar kuma fadhiyo waa magac macna weyn leh laakiin aan qofkastaa fahmi Karin.
Waxaa isweydiin leh sidee buu Abudujaanah ku gaarey in uu dhex galo meeshi ugu amniga badneyd saldhigyada mareykanka?.
Bal aan eegno qaabka uu ku gaarey Abuudujaanah goobtaas xasaasiga ah, Abudujaanah Alkhurasaani wuxuu Caan ka ahaa Golayaasha(forum) laysku dhaafsado Akhbaarta dagaalka caalamka kasocda ee u dhaxeeya islaamiyiinta iyo kufriga noocyadiisa kala duwan.
Abudujaana al khurasaani waxuu Maqaalo ku qori jirey shabakaatka baahiya Akhbaaraatka jihaadka wuxuu kulahaa maqaalo joogta ah kadib waxaa daba galay Jawaasiista Urdun wayna qabteen,waxay ka dalbadeen in uu ku gacansiiyo la dagaalanka jihaadiyiinta wuuna ka aqbalay arinkaas waxay isdhaheen maanta kaluun weyn ayaa shabaqa idiin soo galay ee ka faaiideysta,oo ku dabta ugaar weyn saas darteed waxay u direen pakistaan si uu usoo jaajuuso hogaamiyaasha Alqaacida wuxuu tagay Pakistan isaga oo geshan shaati waxbarasho iyo inuu jaamacad meesha ka dhiganayo kabacdina waxaa rumoobay oraahdii ahayd.انقلب السحر على الساحر .
Abudujaanah isna ugaarweyn ayuu ku tala jiraa inuu dabto wuxuu xiriir lasameeyey mujaahidiinta Daalibaan Pakistaan wuuna lakulmey wuxuu u sheegey arinka jira iyo inuu marna diintiisa uu ku iibsanyn waxyar oo adduunyo ah.
Daalibaan waxay uga faaiideysatay arinkii Rasuulku scw uga faaiddeystay nucaym ibn mascuud dagaalkii khandaq ee aha alxarbu khudcah in uu is qariyo hawshana wato ilaa ay ka gaaraan qasdigooda.
Jawaasiista Urdun markii ay arkeen in ninkaan siduu u dhex galey daalibaan iyo Alqaacida ayay is dhigteen oo kalsooni buuxda siiyeen waxayna ugudbiyeen saraakiishi CIAda.
Kadib waxaa loo xilsaarey Abudujaana in uu daba galo Dr Ayman Dawaahiri oo ka mid ah qiyaadada sare ee Alqaacida waxaana loo diyaariyey Abudujaana xaflad soo dhoweyn iyo sharfid isugu jirta.
Waxaa kasoo qayb galay xafladda Xubnihii ugu muhiimsanaa oo ay kamid ahaayeen 5tii qof ee ugu sarsareysey CIA da Afghanistaan ku sugan oo u xilsaarnaa dabagalka iyo khaarajinta Hogaamiyaasha Alqaacida iyo Daalibaan.
Waxaa kaloo kasoo qayb galay xafladda sarkaalkii isku xiraayey CIAda iyo Abudujaanah sarkaalkaas oo u dhashey dalka Jordan gaar ahaan Qoyska xukunka haysta.
Waxaa shirkaas ahmiyaddiisa uu ku fadhiyey ku garan kartaa in la ogaysiiyey aqalka cad ee looga taliyo mareykanka.
Abudujaana Alkhurasaani wuxuu arinki u sheegey Saaxibadiis Alqaacida iyo daalibaan iyo inuu doonayo inuu camaliya istish-haadiya ku fuliyo saraakiisha kulanka imaanaysa wayna soo dhoweeyeen waxay arkeen in ay tahay fursad ay in badan sugayeen.
Wuxuu qorey Abu-dujaanah dardaarankiisi wuxuuna isu diyaarshey hawlgalkaas khatarta ah,Nimankii CIA da iyo saaxibadoodi urduniyiinta ahaana waxay isleyihiin hawshii aad Ciraaq ka qabateen oo aad zarqaawi ku disheen mid ka weyn ayaad qabanaysaan mareykanna idinka ayuu idin soo dhoweysanayaa hadda kadib oo gacanyaraha kowaad noqanaya maadaama dawladaha carabtu ay u kala tartamaan kii mareykanku jeclaan lahaa awalan.
Jawaasiista Urdun ayaa gacan weyn kulahaa dilkii Zarqaawi sida ay iyaguba cadeeyeen iyaga oo ku faanaya.
Waxaa la gaarey maalinkii xafladda Abudujaanah wuxuu diyaarsaday labiskii uu kaga qayb gali lahaa xafaladda labiskaas wuxuu ahaa lebis khaas ah oo ay xirtaan ragga fuliya qaraxyada fidaaiga ah,wuxuu la kulmey ninkii u dhexeeyey labada dhinac oo la oran jirey shariif waxayna isku raaceen goobtii kulanka waxay ku galeen si sahlan oo farxad iyo soo dhoweyn ku dheehantahay xarunti ayay galeen waxaana yimi dhamaan dadkii kulanka ka soo qayb galaayey kulankii markuu bilowdey ayaa waxaa hal mar meeshii ka dhacay wax aan lagu tashan kadib markii Abudujaanah qarxiyey qalabkii uu ugu soo tala galay in uu kaga qayb galo xafladda waxayna xafladdii ku dhamatey wax aan la mahadin ciribteeda.
Haddaba maxaa khasaaro ah oo Mareykanka iyo Xulafadiisa kasoo gaarey weerarkan?
1.Waxay kuwaayeen Xubnihii ugu muhiimsanaa dabagalka iyo khaarijinti hogaamiyaasha Alqaacida iyo Daalibaan .
2.waxay ku fashilmeen inay sugaan amniga xarumahooda iyo saraakiishooda muhiimka ah.
3.waxay ku hungoobeen adeegsiga dad muslimiin ah oo loo haystey in ay xiriir la leeyihiin mujaahidiinta.
4.waxay ka quusteen adeegsiga iyo isku halaynta dawladaha daba dhilifka u ah iyo shacabka muslimiinta.
5.waxaa laga yaabaa in arinkaan uu xumeeyo xiriirka jaajuusnimo ee kala dhexeeya wadamada carabta iyo kuwa kale ee islaamka sheegta.
6.waxaa dhici karta jawaasiis hawshan u haysay in ay cayriyaan oo ka aamin baxaan.
Maxaa Guul ah oo Al-qaacida iyo daalibaan ka gaareen weerarkan?
1.In ay dhex gashey laanta sirdoonka mareykan(CIA)taas oo mareykanka ku ah dhabar jab weyn maxaa yeeley haddii laantaada sirdoonka la dhex galo waa fududdahay in lagaa adkaado.
2.In ay mareykanka iyo caalamka islaamka ay kala fogeyso arintaani oo mar danbe aan la aamini karin qof muslim ah gaar ahaan dadka munaafiqiinta ah ee muslimiinta jaajuusa.
3.In ay khaarijisay cadawgoodi kowaad kuwoodi ugu darnaa oo ah kuwa khatarta kowaad ku ah hogaamiyaashooda.
4.In dad badan oo mareykanka iyo xulafadiisu shaqaalaysteen ay suura galtahay in ay ku deydaan Abudujaanah Alkhurasaani.
5.In ay tustey mareykanka game ka uu ciyaarayo in lala ciyaarayo mid la mid ah.
6.In Alqaacida ay awood u leedahay in ay weerarto meelkasta oo cadawgeedu ku suganyahay goortey doonto.
7.In ay rucbi iyo argagax ku ridey masuuliyiinta taaalufka oo mareykanku hogaaminayo khatartuna ay meelkasta uga imaan karto mar walba.
Sidee looga dareemey caalamka kale ?
Dad badan waxay ku noqotay arin yaab le dadka kasoo horjeeda siyaasadda mareykanka aad ayay usoo dhoweeyeen.
Waxaase yaab badneyd ururka islaax(ex akhwaanul muslimiin)oo markasta canbaareyn jirey falalka noocaan ah in ay sheegeen in Abudujaana Alkhurasaani uu iyaga la fikir ahaa walaw ay si cad u sheegin in uu ururkooda ka mid ahaa laakiin arinkaas waxaa beeninaya Abudujaana qoraaladiisa oo uu inta badan ku weerari jirey fikirka ikhwaanka iyo salafiyada la fikirka ikhwaanka ee isku sheega wasadiyada oo ay wax badan ku kala duwanayn.
Omar Suleiman Omar (Tita)
Shabkada Maadow :: Qeebta Wararka iyo Maqaalooyinka
Jump to: Select a forum||--Sida aa xubin ugu noqon karto shabakada|--Fadlan Ku Dar Ra'yigaada Halkaan!!|--Qeebta isbarashada & xiriirka xubnaha webka|--Qeebta Quraanka & Anaashiida|--Qeebta axaadithta nabiga nabadgalyo iyo naxariis kor kiisa ha ahaato|--Qeebta Khudbadaha iyo Muxaadarooyinka|--Qeebta Maktabada Buugaagta|--Channelka Shabakada Maadow|--Qeebta Gabayada iyo Murtida iyo Maahmahyada|--Qeebta Wararka iyo Maqaalooyinka|--Qeebta Barnaamijyada Computarka|--Kuliyada Maadow Eee Tiknoolojiyada|--Qeebta Cilmiga|--Qeebta Sawirada iyo Fiidiyawyada|--Qeebta mucjizooyinka aduunka|--Qeebta Caafimaadka